MOOC-kan waxa loogu talagalay ardayda dhammaysata waxbarashadooda dugsiga sare (hadal-yaqaan, teerminal, iwm.) oo u diyaarinaya gelitaanka wareegga waxbarashada sare, dugsiga sare ama jaamacadda. Waad ku mahadsan tahay qalabkan, waxaad awoodi doontaa inaad buuxiso wixii dhiman, ka hor inta aanad bilaabin wareegga xiga ee daraasadaha. Gaar ahaan, haddii aad isu diyaarinayso imtixaan gelitaanka daraasadaha caafimaadka iyo dhakhtarka ilkaha, ama imtixaan kasta oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato agabyada lagama maarmaanka ah ee kaa caawinaya inaad ku qabato makaanikada. MOOC-dan waxa kale oo laga yaabaa inay anfacdo haddii aad isku diwaangelisay sannadka ugu horreeya ee waxbarashada sare oo ay kugu adag tahay inaad barato koorsada fiisigiska. Waad ku mahadsan tahay waayo-aragnimadayada kormeerka ardayda jaamacadda iyo hawlaha diyaarinta, dhibaatooyinka caadiga ah ee ardaydu waa naqaan. Waxaan u dhisnay MOOC-kan si waafaqsan, gaar ahaan anagoo ka hortagayna ardayga matalaadiisa iyo fikradihiisa hore.
Fiisigiska guud ee bilowga wanaagsan ee tacliinta sare Diisambar 13, 2021Tranquillus
READ MOOC Bees iyo deegaanka
horeBaro wax ku saabsan baridda Sayniska Dijital ah iyo Tignoolajiyada
socdaBIG - Hordhaca Bioinformatics iyo Daawooyinka Genomic